विचित्र संसार Archives - Page 60 of 61 - दैनिक नेपाल न्युज
बाँदर र मान्छे बिचको अनौठो प्रेम कहानी, कल्पनाले छोरी सरह बाँदर पालेकी छिन् बाँदरलाई (भिडियो)
काठमाडौँ । जनावरलाई माया दर्शाउने मानिसहरुको आ आफ्नै तरिका र रुची हुन्छन् । जसअनुरुप कसैले घरमा कुकुर पाल्छन् त कसैले बिराला । घोडा, काजिल, खरायो पाल्नु सामान्य मानिन्छ । कसैले बाँदरलाई पनि घरमा ल्याएर माया दर्शाउँछन् । जसमध्येकी धादिगंकी कल्पना आलोमगर पनि बाँदर भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन् । उनले एएटा सानो बाँदरलाई ल्याएर घरमा सन्ताजसरी नै […]
२ years अगाडि
३५ दिनमा मौन तपस्या बसेकी माताको यो हालत, गुरु चैतन्यले खुलाए माताको बास्तबिक कुरा (भिडियो)
कालिगण्डकी किनारमा मौन तपस्यामा बसेकी माताका बिषयमा बिभिन्न कुराहरु बाहिर आईरहेका छन् । उनी एकान्त गुफामा मौन तपस्या बसेको ३५ दिन भन्दा बढी भयो । उनी मात्र दुबो र बेलपत्र खाएर बसको बताईएपनि पुजारीले गाईको दुध खाएको खुलासा गरे । उनको तपस्या र एकान्त मोह देखेर देशभरका मानिसहरु उनलाई हेर्न र दर्शन गर्न स्याङ्जा जिल्ला […]
प्रधानमन्त्रीले हलो जोतेको सम्झना गरेपछि…
–प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, ८ असोजः “म आफैँ हलो जोतेर, खेती गरेर आएको हुँ । मलाई जमीन, सिँचाइ र उत्पादनबारे राम्रोसँग थाहा छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो युवा उमेर सम्झँदै किसान नेताहरुसँग भन्नुभयो, “सिँचाइ र प्रविधिको उचित प्रबन्ध गर्न सकिए सानो ठाउँमा पनि धेरै उत्पादन गराएर लाभ लिन सकिन्छ ।” आफ्नो गृह जिल्ला झापाको […]
मेषः– प्रतिकुल परिस्थितिमा काम गर्नु पर्ला । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । आफन्तले धोका दिने छन् । आफ्नो धन अरुको लागि खर्च गर्नु पर्ला । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका काम पनि रोकिने छन् । घरमा शान्ति मिल्ने छैन । वृषः– दिन शुभ देखिन्छ । नयाँ कामको प्रस्ताव […]
मंगलबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम
काठमाडौं । कुनै पुजा आजा गर्दा हामिले भगवन गणेशजीलाई सम्जने गरिन्छ मंगलबारको दिन भगवान गणेशजीको पूजा गर्दा मिल्ने छ । लाभै लाभ हरेक मानिसहरुले मंगलबार भगवान गणेशको पूजा गरेकै हुन्छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ । धर्मशास्त्रका अनुसार यी काम मंगलबार गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् । मंगलबार […]
मान्छेसँग बोल्ने मैना चरी, मान्छेको जस्तै हुबहु आवाज निकाल्छ चराले [हेर्नुहोस भिडियो]
मोरङको लेटाङमा एउटा घर छ त्यो घरमा एकजना बुढी मान्छे बस्छिन दिनभर । उनी छोरी ज्वाइका घरमा बस्छिन । उनका ज्वाइँ काठका मिस्त्री हुन । दैनिकी ठेक्का पट्टाको काम गर्छन । बिहान सबेर उठेर हिडेका उनी साझ परेपछि मात्र आउछन घर । छोरी पनि दिनभर काममा जान्छिन । घरमा बुढी आमा मात्र एक्लै बसेकी हुन्छिन […]
मेषः–आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । प्रयत्न गरेमा बक्यौता रकम उठ्नेछ । उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । आफन्तजनबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । समयको सदुपयोग गर्नु होला । नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी नगर्नु होला । गोपनियता भङ्ग नगर्नु होला । वृषः– काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन् । पठन पाठनमा प्रगति […]
कतारको जेलबाट फर्केपछि बिनोद रानाभाटको बिहेको कुरा चल्यो !
पछिल्लो समय कतारको जेलमा ३४ महिना कैदी जीवन बिताईसकेपछि नेपालका बिनाृद रानाभाट स्वदेश फर्के । उनलाई फर्काउन भनेर मागिएको ८२ लाख नेपाली रुपैंया सम्पुर्ण नेपालीले एक भएर उठाईसकेका पनि थिए । वास्तवमा बिनोद रानाभाट अभियानमा ८२ लाख मात्रै नभएर १ करोड २१ लाख हाराहारी रकम उठेको जानकारी समितिले दिएको छ । तर बिनोद रानाभाट भने […]
४ बर्षदेखी भूतसँग कुरा गर्ने अचम्मका बाजे, ‘भन्छन् मध्यरातमा ढोका हान्दै रुन्छ एकचोटी ओछ्यानबाटै तान्यो’
गुल्मी । गुल्मीको यस्तो ठाउ जहा घनाजंगलमा एउटा मात्र घर छ र त्यहा बस्ने परिबार ४ जनाको छ । उक्त घरमा एउटा ६६ बर्षिय बाजे छन । जो एकदमै बृध्द अवस्थामा छन तर उनको घरमा दैनिकी भूतले बास गर्ने गर्छ ।उक्त भूत कहाबाट आउछ कहा जान्छ र कस्को आत्मा होला भन्ने थाहा नभएको उनी बताउछन […]
दुबो खाएर मौन तपस्या बसेकी मातालाई यि व्यक्तिले दुध खुवाउने गरेको खुलासा
स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ नगरपालीका वडा न: १ मा रहेको राम्दी कालिगण्डी किनारमा एक महिला मौन तपस्यामा बसेको करिब एक महिना हुन लाग्यो । अर्धखांची पुखौली घर भई बुटवलमा बस्दै आएकी माताले देशको शान्ति र ज्ञान आर्जनका लागी कठोर मौन तपस्या बसेको थाहा हुन आएको छ । माता मौन तपस्यामा बसेपनि उनले दैनिक दुईघण्टा भक्तजनहरुसंग बार्तालाप […]
तपाईंको दिन शुभ होस्, हेर्नुस् आजको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आज धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । व्यवसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने योग छैन । आम्दानीमा कमी आउने छैन । पारिवारिक जीवनमा तलबितल पर्न सक्छ । अभिभावकवर्ग, गुरुजन र ठूलाबडासँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न सक्छ । पैतृक सम्पत्ति र अचल सम्पत्तिमा विवाद हुनसक्छ । […]
मेषः– काम गर्ने वातावरण सहज बन्दै जानेछ । मध्यान्ह पछिको समयले अझै साथी दिनेछ । आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ । साथी भाई इष्टमित्रको सहयोग सहानुभूति पनि मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा कार्यभार थपिनेछ । कला सहित्य तथा यान्त्रिक काममा रुची बढ्नेछ । वृषः– समयलाई बुझेर काम गर्नु […]
यि राशि भएका महिलाहरुसँग धरापमा बित्छ जिन्दगी, कुन राशी भएका महिलाहरुसँग हाँसी खुशी बित्छ जिन्दगी, पढ्नुहोस्
मेष राशी भएकासँग रिसाउँछन् महिलाः मेष (Aries) राशी भएका अर्थात जसको नाम चू, च, चो, ला, ली, लू, ले लो, आ बाट सुरु हुन्छ, त्यस्ता पुरूषहरुप्रति महिला कम आकर्षित हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु स्वभावमा जति धेरै सौम्य र शान्त देखिएता पनि महिलाहरु उनीहरूसँग टाढै बस्ने गदर्छन् । आफ्नो झुटो अहम र मूर्खताका कारण उनीहरुले कहिले […]
सुहागरातका दिन जब श्रीमान्ले श्रीमतीको घुम्टो खोलेर काखमा लिन खोजे तब श्रीमान्को होस् उड्यो !
एजेन्सी । सुहागरातका पलहरु अविस्मरणीय बनाउन जुनै बेहुलाले पनि चाहना राख्छ । तर आफ्नी बेहुलीसँग जव सुहागरातको रमाइलो सुरु गर्न खोज्दा आफ्नी पत्नि तेस्रो लिंगी भएको थाहा पाएपछि भारतको उत्तर प्रदेशको उन्नाव जिल्ला यि बेहुलाले प्रहरीको सहायता माग्न पुगेका छन् । ति बेहुलाले आँफुलाई झुक्याएर तेस्रो लिंगीसँग विबाह गरेर जीन्दगी बर्बाद पारिदिएको भन्दै न्याय मागिरहेका […]
मेषः– काम प्रतिको प्रेम भाव घट्ने छैन तर समयमा गर्ने प्रयत्न गर्नु होला । नयाँ संझौता हुनेछ । थोरै प्रयत्न गर्नु भयो भने नयाँ कार्य योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा प्रगति हुनेछ । वैदेशिक कार्य सफल हुनेछन् । जीवन साथिबाट सहयोग मिल्नेछ । रजोगुण बढ्नेछ । यात्राको मुहूर्त टरेको छैन । […]